Maamulka Buule Burte oo ka dayriyey shaqada Garoonka diyaaradaha Buuloburde! - Awdinle Online
Maamulka Buule Burte oo ka dayriyey shaqada Garoonka diyaaradaha Buuloburde!
February 10, 2020 (Awdinle Online) –Degmada Buule Burte ee Gobolka Hiiraan waqti fog waxa ay ku jirtaa go’doon ay geliyeen Al-Shabaab, waxaana istaagay isku socodka Gaadiidkii gela iyo kuwa ka baxa Degmadaasi.
Wadada kaliya u furan degmadaas waa dhanka duulimaadka diyaaradaha yar yar ee maalin waliba caga dhigta Garoon aan u dhameystirneen adeegyada Bulshada oo ay sameysteen dadka deegaanka.
“Waxaa burbursan Wadada ay ku oroddo diyaaradda kolka ay duuleyso kuna soo degto, ma wareegsano garoonka oo waa meel banaan, mana jiraan goobo nasasho oo ay dadka kusii sugaan diyaaradaha. Ayuu yiri Liibaan Cabdi Burusow ku simaha Gudoomiyaha Degmada Buule Burte.
Dadka sugaya diyaaradaha ma helaan kuraas, waxaana ku jira dad waayeello ah iyo bukaanno aan awoodin in ay cadceedda u taagnaadaan diyaaradda ay raacayaan. Ayuu yiri Liibaan Cabdi oo ah ku simaha Gudoomiyaha Degmada Buule Burte.
Sugidda ammanka Garoonka waxa uu sheegay in ay mas’uuliyad ballaaran iska saareen, ciidamada Dowladda ay had iyo jeer la socdaan dhaq-dhaqaaqa dadka ka duulayo iyo kuwa ka degaya.
“Dadka Buulo Burte waa ay dadaaleen, waxa aan isleeyahay waxaa la joogaa waqtigii Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle ay u dhameystiri lahaayeen waxyaabaha ka ka harsan adeegga Garoonka Diyaaradaha” ayuu sii raaciyay ku simaha Gudoomiyaha Buule Burte.
Previous articleKoox hubeysan oo dil iyo dhaawac ka geystay Degmadda Afgooye
Next articleSenator Xuseen Sheekh“Dib u eegista Dastuurka Dalka waxa uu ka socon la’ yahay Khilaafka DFS iyo Dowlad Goboleedyada.